प्याजको बढ्दो मूल्य र घट्दो आपूर्ति – 720528 | Bishow Nath Kharel
प्याजको बढ्दो मूल्य र घट्दो आपूर्ति – 720528
Posted on September 15, 2015 by bishownath
अब सरकारले जनतालाई राहत दिने हो भने देशमा चिनियाँ प्याज वा तेस्रो मुलुकहरूको आयातलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार यथाशीघ्र लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । दसैंमा प्याजको अत्यधिक माग हुने भएकाले अब सरकारले नेपाली व्यापारीहरूलाई चीनबाट प्याज आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
कृषिप्रधान मुलुक, त्यो पनि पहाडदेखि तराईसम्म सजिलै उत्पादन गर्न सकिने प्याजको हाहाकार हुनु आफंैमा लाजमर्दो यथार्थ हो, तर पनि हामी प्रत्येक वर्ष यस्तै समस्या झेल्न विवश छौं । मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै न्यून आयस्रोत भएका परिवारले प्याजको खरिद गर्नै छाडेका छन् । देशको मागअनुसार स्थानीय स्तरबाट उत्पादन हुन नसक्दा प्याज भित्रिने गरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले जनाएको छ ।
कृषि विज्ञहरूले प्याजको आयात रोक्न र मूल्य वृद्धिबाट बच्नका लागि बेमौसमी प्याज खेतीतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुख्य आपूर्ति स्रोत मानिने भारतबाट हुने प्याजको आयातमा आएको कमी नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो । भारतबाट दैनिक १५० मेट्रिक टन भित्रिने गरेको प्याज हाल दैनिक राजधानीमा ४५ मेट्रिक टन आउने गरेको छ । भारतीय बजारबाट आपूर्ति हुने प्याज आयात गर्नमा समेत भारतीय भन्सार कार्यालयले कडाइ गरेपछि बजारमा प्याजको आपूर्तिमा समेत कमी आएको छ ।
भारतीय क्षेत्रमै प्याजको कमी देखिएकाले उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक बजारको माग पूरा गर्नु नै हो, यसैका लागि भारतीय भन्सारले कडाइ गरेको बुझिएको छ । भारतमा पनि बढी प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगातार वर्षा भएकाले प्याजको उत्पादनमा कमी आई त्यहाँभित्रै मूल्यवृद्धि भएको हो । भारतीय बजारमा पनि मुस्लिम पर्व रमजानयता प्याजको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । नेपाल भारतसँग प्याजमा भर पर्नुपरेकाले आयात कम भएपछि मूल्यमा वृद्धि हुने हो र प्याज उत्पादनका लागि अहिले सिजन नभएको र मुलुकमा उत्पादन भएको प्याजलाई भण्डारण गर्ने प्रविधिको अभाव र भारतबाट आयात हुने प्याज पनि कम हुने भएकाले हाल प्याजको भाउ निकै उच्च भएको हो ।
नेपालमा प्याज खेती हिउँद लागेपछि मात्रै सुरु हुने भएकाले मूल्य आफैं अकासिने सम्भावना छ । आजकाल प्याज मासुलगायत हरेक किसिमका तरकारीका लागि अनिवार्यजस्तै भएको छ । यो अवस्थामा मूल्य बढ्नुका साथै बजारमा जहाँतहीँ नपाइँदा उपभोक्ताले अप्ठ्यारो महसुस गर्नु स्वाभाविक हो । यसको अर्थ सरकार अब चुप लागेर बसोस् भन्ने होइन । खानाका लागि अनिवार्य सर्त बनिसकेको प्याज सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यदि तेस्रो मुलुकमा सस्तो दरमा पाइन्छ भने त्यतातिर पहल गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर, पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, हाम्रो सरकारलाई जनताको समस्याले पटक्कै पिरोल्दैन । भारतमा मूल्य पाँचौं गुणा बढेकाले प्याजको महँगीका विषयमा हंगामा मच्चिएको छ । उपभोक्ताको भान्साको समस्यामा सरकारको ध्यान नपुग्नु विडम्बना हो ।
हरेक भान्साका लागि प्याज पनि एक किसिमको मसलाजन्य वा तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यो बालीको खेती देशको हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा गरिन्छ । अत्यधिक आपूर्ति भएका बेला २० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म रहेको प्याजको खुद्रा मूल्य हाल आएर प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य १२० रुपैयाँ छ । यहाँको उत्पादन सामान्यतया चैतपछि मात्रै बजारमा आउने भएकाले यतिबेला भारतीय उत्पादननै निर्भर हुनुपर्छ । गत वर्ष कालीमाटीमा बिक्री भएको प्याजमध्ये झन्डै ९७ प्रतिशत प्याज भारतबाट आएको थियो । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले उपत्यकामा दैनिक १८० मेट्रिक टन प्याज बिक्री हुने गरेको जनाएको छ । प्याजको आयात ९५ प्रतिशत भारतबाट हुन्छ भने हाम्रो देशमा ५ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तो अभावका समयमा चीनबाट पनि प्याज आयात हुन्छ । दैनिक १०० टन सुकेको प्याजको माग भएको उपत्यकामा ३÷४ दिनदेखि ५० देखि ५५ टन मात्र प्याज भित्रिने गरेकाले मूल्य अकासिएको समितिले जनाएको छ ।
प्याज दैनिक भान्सामा नभइनहुने मसलादारका रूपमा प्रयोग हुने एक प्रकारको मसला हो । खासगरी तरकारी वा मसलाका रूपमा प्याजको प्रयोग गरिँदै आएको छ । भान्साको अत्यावश्यक वस्तु प्याजको मूल्य गत वर्ष यही सिजनभन्दा ५ गुणा बढेको छ । गत वर्ष साउनमा १९ रुपैयाँ प्रतिकिलो थोक कारोबार भएको प्याज यस वर्ष भने मुलुककै प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटीमा ९२ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । यो ३८४.२१ प्रतिशत वृद्धि हो । खुद्रा बजारमा भने १२० रुपैयाँभन्दा बढी छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो ५० बाट बढेर साउन पहिलो साता ६० रुपैयाँ पुगेको थियो । एक महिना नबित्दै दोब्बरले बढेर अहिले प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ पुगेको हो ।
यो वर्षको सुरुमा ३५ देखि ३८ रुपैयाँ थोक मूल्यमा कारोबार भएको प्याजको भाउ बर्खा लागेपछि बढेर किलोमा ७० देखि ७५ रुपैयाँ थोक मूल्य पुग्यो । साउनको बीचमा मूल्य केही घटेर प्रतिकिलो ६५ देखि ६८ मा थोकमा कारोबार भएको प्याजको मूल्य भदौ लागेपछि ह्वात्तै बढेर १०० देखि १२० रुपैयाँ थोक मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । यस वर्ष प्याज भारतमै कम उत्पादन भएकाले नेपाल भित्रिने प्याजको परिणाम घटेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली उत्पादनको प्याजले न्यून अनुपातमात्रै आन्तरिक खपत धान्ने र अधिकांश आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उतैबाटै मूल्य बढेपछि नेपालसम्म आइपुग्दा यसको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । यस्तै अवस्था रहिरहे दसैं र तिहारजस्ता प्याजको माग उच्च हुने चाडपर्वको बेला मूल्य अझ बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
स्वदेशमा यसको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्लामा लागू गरेको प्याज अभियान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा प्याजको आयात हुने गरेको छ । प्याज उत्पादन वृद्धि गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ देखि बारा र पर्सालगायत तराईका १० जिल्लामा प्याज अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसका लागि अघिल्लो गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु. १ करोड ९२ लाख लगानी गरेको तथ्यांक छ ।
मागअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा वीरगन्जका नाकाबाट अघिल्लो गत आर्थिक वर्षमा १५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको १२ हजार ३३६ मेट्रिक टन प्याज नेपाल भित्रिएको क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, वीरगन्जले जानकारी दिएको छ । वैध र अवैध रूपमा आयात गरिने प्याजको मूल्यलाई संयोजन गर्दा यो नाकाबाट मात्रै करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्याज आयात भएको अनुमान गरिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको प्याज वीरगन्ज हुँदै देशका विभिन्न भागमा आपूर्ति हुने गरेको छ ।
अब सरकारले जनतालाई राहत दिने हो भने देशमा चिनियाँ प्याज वा तेस्रो मुलुकहरूको आयातलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार यथाशीघ्र लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । दसैंमा प्याजको अत्यधिक माग हुने भएकाले अब सरकारले नेपाली व्यापारीहरूलाई चीनबाट प्याज आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि व्यापारीहरूलाई भन्सार सहुलियत दिने वा निश्चित समयावधि तोकेर प्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । व्यवसायीले भने चीनबाट प्याज आयात गरी आपूर्ति गर्दा ठूलो रकम घाटा बेहोर्नुपरेको बताएका छन् । चिनियाँ प्याजको आकार ठूलो हुने, स्वादिलो नहुने, भण्डारण गर्नका लागि उपयुक्त शीतभण्डार नहुँदा छिट्टै कुहिनेजस्ता कारण घाटा बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि प्याज आयात गर्न सकिन्छ । भारत स्वयंले पाकिस्तान र अन्य मुलुकहरूबाट प्याज आयात गरिरहेको छ । चाडपर्वका सिजनमा अभाव पूर्तिका लागि हवाई कार्गोबाट समेत आयात गर्न सकिन्छ । अर्कातिर भारतमा विदेशी प्याज आयात हुन थालेकाले त्यहाँबाट पनि खुला सिमानाका कारण वैध–अवैध रूपमा बढी मूल्य तिरी प्याज ओपचारिक रूपमा आउन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा होस पु¥याएर जनतालाई राहत दिने कार्यको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल प्याजै उत्पादन हुन नसक्ने देश भने होइन । तराईदेखि पहाडसम्म यसका खेती हुन सक्छ । यसर्थ स्वदेशमै धेरै प्याज उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसका लागि योजना बनाइहाल्नु जरुरी छ । तराईका १० जिल्लामा केही वर्षअघि प्याज मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारले कार्यक्रम सफल नभएको भन्दै यसपालिदेखि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । हठात यस्ता निर्णय गर्नुभन्दा के कारणले असफल भयो भन्ने अध्ययन गराई हालको हाहाकारबाट पाठ सिकेर देशका सम्भाव्य सबै क्षेत्रमा प्याज मिसन सुरु गर्ने हो भने फेरि यस किसिमको संकट नआउने पो थियो कि !
Source : http://np.karobardaily.com/2015/09/66208/